အဝေးပြေးလမ်းမကြီး | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Eskişehir Beton Yolları İle Örnek Oluyor; Özellikle kırsalda hayata geçirdiği beton yol çalışmaları ile birçok kuruma örnek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 13-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 1. Beton [ပို ... ]
Kayseri’de yapımı tamamlanan bir dizi projenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Millî Savunma Bakanı Hulusi [ပို ... ]
İzmirအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲများတွင် Quick Launch နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး
88 ။ က "တူရကီစီးပွားရေး, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်" အတွင်းဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေးများ၏ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတသော Izmir နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနေ့ရက်များအဲဒီ session နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ TC, Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တည်ခင်းဧည် [ပို ... ]
Mardin ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, Mardin အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mustafa Yaman, TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သောနှင့် Abdulkadir Uraloğl၏အဝေးပြေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှလာမယ့်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ် [ပို ... ]
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yolları için kamulaştırdığı Çatalca’daki arazinin istimlak bedelini ödeyemedi. Arazi sahiplerinin dava açarak yolu kapatma hakkı bulunuyor. Proje bedeli 14 milyar 555 milyon [ပို ... ]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli alternatif yollarından birisi olacak olan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, viyadük ve bağlantı yollarının 29 [ပို ... ]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, OSB Kavşağı-Boğazköprü arasında çalışmalar yapan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün şantiyesini ziyaret etti. Karayollarının yeni Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş ile görüşen Başkan Memduh [ပို ... ]
İstanbul İzmir Otoyolunu Açıldı : İstanbul İzmir arasını kısaltacak 3.5 saate indirecek dev İstanbul İzmir Otoyolunu Projesi kapsamında yeni kısımlar da hizmete alınıyor. Yapımı tamamlanan Balıkesir – Edremit Ayrımı – [ပို ... ]
Bursa အမြင့်မြန်နှုန်းရထားအနာဂတ်? .. အချိန်ထွက်အပြေးသောအခါ, လူ့မှတ်ဉာဏ်အလျင်အမြန်မေ့လျော့ ... ပို. ပို. ဧည့်သည်များကြောင့်အမှတ်တံဆိပ်များ၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်း Bursa သမိုင်းနှင့်သဘာဝခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးမြှင့်ပြင်ပမှာဧည့်ခံကြသည်ဘယ်မှာကြယ်ပွင့်, ထွန်းလင်း [ပို ... ]
တူရကီ Nigde အဝေးပြေးစီမံကိန်းများအတွက် Expropriation ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့တရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေထားပြီးအလျင်အမြန်!
Ankara Niğde Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1359) 25 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anka Niğde [ပို ... ]